Mulkiilaha Shabakadda Somalilandpress oo Ururrada Suxufiyiinta Somaliland si diirran ugu soo dhaweeyeen Berbera | Berberanews.com
Home WARARKA Mulkiilaha Shabakadda Somalilandpress oo Ururrada Suxufiyiinta Somaliland si diirran ugu soo dhaweeyeen...
Mulkiilaha Shabakadda Somalilandpress oo Ururrada Suxufiyiinta Somaliland si diirran ugu soo dhaweeyeen Berbera
Berbera-(Berberanews)- Madax ka socotay Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA iyo Suxufiyiin tiro badan oo ka kala socday qeybaha kala duwan ee warbaahinta Somaliland, sida Mareegaha Internet-ka, Telefiishanada, Joornaalada, iyo masuuliyiin kale, ayaa saaka si diiran loogu soo dhaweeyey Madaarka Caalamiga ah ee Magaalada Berbera Mulkiilaha Shabakada Caalamiga ah ee Somalilandpress.com Maxamed Guuleed kadib markii uu ka soo duulay dalka dalka Mareykanka oo uu degen-yahay. Guddoomiyaha Ururka Mareegaha Somaliland ee Somaliland Online Association (SOA) Mustafe Cabdi Maxamed (Mustafe-Jannaale) oo qolka nasashada ee Madaarka Berbera kaga hadlay soo dhaweynta Mulkiilaha Shabakada Somalilandpress Maxamed Guuleed ayaa ku tilmaamay halyey qaran, isla markaana ku hambalyey xilka culus ee u hayo. “Waxaan ciidiisa hooyo ku soo dhaweynayaa mulkiilaha shabakada Caalamiga ah ee Somalilandpress.com oo ah shabakada kaliya ee luuqada Ingiriisiga Somaliland wararkeeda ku baahisa, taas mid adduunku wararka iyo xogta Somaliland ka helo ama ka xigto.” Ayuu yidhi.
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi; “Shabakadda Somalilandpress waa shabakad marjac u noqotey dadka ajanebiga ah, ee daneeya inay Somaliland macluumaad ka joogto ah ka helaan, kuwaas oo dhacdooyinka dalka ka dhaca halkaasi kala socda,waxaanan odhan karnaa Maxamed Ibraahim Guuleed waxa uu gutey waajib saaran oo uu ka soo baxay, waanu ku mahadsan-yahay inuu Somaliland iyo dadka ajanebiga u noqdo biriij isku xidha.”
“Waxaan leeyahay Xukuumadda Somaliland waa inay maamus weyn u sameysa, waayo waynu dareemi karnaa qiimaha, sumcada iyo karaamada uu dalka Somaliland u sameeyey,isaga oo ka mid ah bahdayada Mareegaha Internet-ka Somaliland oo magaca uu xanbaarsan-yahay waanu la sidanaa,waxaanan leeyahay xilka aad hayso ha ka niyad-jabin halkaasi ka sii wad.” Ayuu yidhi Mustafe-Jannaale, isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu ku dheeraaday doorka iyo kaalinta ay Website-yadu kaga jiraan warbaahinta Somaliland, kuwaas ooh awl-culus oo qaran haya.
Maxamed Siciid Cabdilaahi (Xarago) oo ka tirsan guddida fulinta ee Ururka suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku bogaadiyey mulkiilaha shabakada Somalilandpress xilkaasi uu dalka u hayo, waxaanu yidhi; “Aniga oo Wakiil ka ah Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA waxaan maanta madaarka Magaalada Berbera ku soo dhaweeyey Maxamed Ibraahim Guuleed oo ah halyey qaran,sababta oo ah Maxamed Guuleed waxa uu sameeyey Website-kii ugu horeeyey ee ay Somaliland leedahay ee luuqada Ingiriisiga wararka dalka ku baahiya, waana wax lagu hambalyeeyo oo uu muteystey.”
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi; “Iyada oo aanay wax baddan Somaliland xogteeda ay caalamku waxba kala soconin ayaa waxay Somalilandpress.com u fududeysay dad badan oo bulshada caalamka ahi inay Somaliland wax ka bartaan.Waxaanan rajeynayaa inay Somalilandpress aqoonsiga ay baadi-goobayso Somaliland kaalin laxaad leh ka qaadan doonto.”
Maxamed Xarago waxa uu ku dooday inay SOLJA ahaan u diyaarin doonaan Shahaado sharaf ay ku maamusayaan Maxamed Guuleed xilkaas uu hayo awgeed, waxaanu ku booriyey inuu xilkaas uu hayo halkaas ka sii wado.
Mulkiilaha Shabakada caalamiga ah ee Somalilandpress.com oo ah Shabakad wax ku qorta luuqada Afka Ingiriisiga Maxamed Ibraahim Guuleed oo qolka nasashada ee Madaarka Berbera kula hadlayey saxaafada oo dareenkiisa cabiraya ayaa waxa uu u mahad-celiyey Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA, Ururka Mareegaha Internet-ka ee Somaliland Online Association (SOA) iyo suxufiyiinta kale ee madaarka Magaalada Berbera ku soo dhaweeyey. “Waa markii labaad ee aan waddanka dib ugu soo noqdo, waxa iigu horeysay sanadkii 2008-kii oo aan Website-kan Somalilandpress.com sameeyey markaas oo aan saxafiyiin tiro baddan aanu is-baranay.Markaa maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanay inaan si nabad ah ciideydii hooyo dib ugu soo noqdo, aniga oo waddankii wax baddan aqoon u leh oo ay horumarka Somaliland gaadhay ay wax badan ka qabatey Somalilandpress.com. U-jeedada aan waddanka u imidna waxa weeyaan shaqo iyo dal-xiis, waxaanan waddanka joogayaa muddo hal bil ah oo aan u kurgali doono nolosha dadku ku sugan yihiin, markaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin sida qiimaha leh ee aad ii soo dhaweyseen.”
Maxamed Guuleed waxa uu sheegay hawsha qaran ee ay Somalilandpress ahaan hayaan inay halka ay imika mareyso ay kor uga sii qaadi doonaan. “Waxaanu imika ku talo-jirnaa waxyaabo baddan, waxaanan wadnaa inan waxyaabo baddan Shabakada Somalilandpress ku soo kordhino sida Vidio-ga, waxaanay ku xidhan tahay Google-ka ILAAHAY-na waxaan ka baryayaa inuu nagu garab-galo arrintaas.”
“Muddadii ay Somalilandpress ay jirtey waxaanu xidhiidh fiican la yeelanay Website-yada iyo joornaalada ka soo baxa waddanka Mareykanka, waxaana bishan July ee soo socota dalka iman doona joornaal ka soo baxa dalka Israaiil xog ka qori doona Somaliland, taasna waxa sahashay Somalilandpress.com oo xidhiidh la yeelatey inay dalka yimaadaan, Marka Newyork Times Iyo Loss Angels iyo qaar kale waxay naga xigtaan wararka aanu ka qorno Somaliland.” ayuu yidhi Maxamed Ibraahim Guuleed.
Previous articleSomaliland oo uu hadheeyey Sicir-barar soo food-saaray Qiimaha Shidaalka, Saamaynta Bulshada iyo Dhawaaqa Gaadiidlayda
Next articleTalyaaniga oo soo dhaweeyey Wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland, sheegayna inaan la isku hallayn karin Dawladda KMG-ka ah